Tag: mhanya kuburitsa kugovera | Martech Zone
Tag: mutapi wekuburitsa
Chipiri, Gunyana 8, 2020 Chipiri, Gunyana 8, 2020 Douglas Karr
Hukama hwepaguru hwachinja zvakanyanya nekuputika kwenzvimbo dzezvenhau munguva yedhijitari. Hazvichakwanise kumisikidza zvitoro zvishoma uye kuisa pamwechete runyorwa rwemwedzi rwekutaura kwechako. Nhasi, nyanzvi yemazuva ano yehukama neruzhinji inofanirwa kubata inogara ichikura runyorwa rwevanokurudzira uye zvinyorwa, zvobva zvaratidza maitiro avari kuita pane brand. PR software yakashanduka kubva kuiri nyore kudhinda kuburitsa kuendesa kune yanhasi hukama manejimendi
Kana iwe uchida kunyatsogadzirisa rako rekushambadzira rebasa, iwe unofanirwa kuita basa riri nani rekuronga zuva rako, kuongororazve yako network, kugadzira hutano hutano, uye kutora mukana wezvikwata zvinogona kubatsira. Tora Tekinoroji Iyo Inokubatsira Iwe Kutarisa Nekuti ini ndiri tekinoroji mukomana, ini ndichatanga neizvozvo. Handina chokwadi nezvandingaite ndisina Brightpod, iyo sisitimu yandinoshandisa kuisa pamberi mabasa, kuunganidza mabasa muzvikwiriso, uye kuita kuti vatengi vangu vazive mafambiro
Imwe yemasevhisi atinopa kune vatengi vedu ndeyekutarisa mhando ye backlinks kune yavo saiti. Sezvo Google yakanangana nekushinga nzvimbo nematanho kubva kunzvimbo dzinonetsa, takaona vatengi vanoverengeka vachirwira - kunyanya avo vakashandira SEO mafemu munguva yakapfuura iyo yakadzosera kumashure. Mushure mekuparadzanisa zvese zvinongedzo zvisina mubvunzo, taona kuvandudzwa kwematanho pamasaiti akawanda. Maitiro ekushandira uko kwese kubatana kunotariswa nekusimbiswa